HCC: Décès de la Haute Conseillère Madame RAHARISON
Les Hauts Conseillers
et tout le Personnel de la Haute Cour Constitutionnelle
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Lala Yvonne Herisoa
survenu le 30 Mars 2017
HCC: Nodimandry ny Mpanolotsaina Avo Ramatoa RAHARISON
Ny Mpanolotsaina Avo
ary ny Mpiasa rehetra eto amin’ny ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana
dia mampandre anareo ny fodiamandrin’
dRamatoa RAHARISON RANOROARIFIDY Lala Yvonne Herisoa
Ny Alakamisy 30 Martsa 2017
jeudi, 30 mars 2017 21:18
Ampasikely-Amparafaravola : Valo lahy ireo maty ho an’ny tanindrazana ny 1947
Niavaka ny fahatsiarovana ny faha-70 taonan'ny tolom-panafahana 29 martsa 1947 teto Ampasikely, izay namoy valo mirahalahy tao anatin’ny Tolom-panafahana 1947.
Efa nalain’ny fianakaviana ny taolambalon’ny efatra tamin’ireo mahery fo ireo.
Tsy ho very maina ny rà nalatsak’izy ireo, hoy ny Ben’ny Tanàna Dr Jean Louis Robinson fa niampita amin’ny taranaka aty aoriana ny afom-pitiava-tanindrazana izay nananany. Marik’izany ny nanavaozana ny Tsangambato fahatsiarovana azy valo mirahalahy sy ny fasana ilevenan’izy efatra tavela eto Ampasikely.
“Fitaratra ho an’ny rehetra ny zava-bitan’ny Kaominina Ampasikely eo amin’ny fanomezan-danja ireo mahery fon’ny firenena”, hoy ny lehiben’ny Distrika Amparafaravola.
Fiaraha-monina : Mamaky trano hatramin’ny vehivavy bevohoka
Fahantrana sa efa tanana zatra mitsotra ? Fianakaviana trano iray aminy, mifanao ambony ambany, no norobainy, niantsoany lehilahy iray hiara-hanatanteraka aminy io vaky trano io tao Ambodimanga Ambatondrazaka.
Noraisim-potsiny anefa ilay vehivavy rehefa nataon’ny Polisy ny fitsongoan-dia taorian’ny fitarainana nataon’ny tompontrano.
Toamasina : Baisse drastique des anciens combattants
Il ne reste que 34 combattants nationalistes ayant participé à l’insurrection du 29 mars 1947.
jeudi, 30 mars 2017 20:47
RN7 : Sprinter nifandona tamin’ny kamiao Citerne, olona 7 naratra mafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny lalam-pirenena faha 7 iny, ny tolakandron’ny Alakamisy 30 marsa 2017 io. Fiara Sprinter mpitatitr’olona hihazo an’Antsirabe no nifatratra tamin’ny fiarabe mpitatitra solika ireny, teo Ambatomainty 12 km tsy hidirana an’Antsirabe.
Mpandeha miisa 7 tao amin’ilay fiara mpitatitra no naratra mafy ka ny iray no tena atahorana ny ainy.
Nambaran-dRamarolahy Gabriel, isan’ireo mpandeha fa haingana dia haingana no nisehoan’ny loza satria toa nihevitra ny hisongona fiara minibus Mazda ilay Sprinter no nipoitra tao anaty fiolanana sady nanezaka niakatra fiakarana ilay kamiao mpitatitra solika ka tsy azo nialana ny fifandonana.
jeudi, 30 mars 2017 14:29
Mahajanga : Mitaky karama telo volana ny mpiasan'ny Kaominina
Nisy fihaonan'izy ireo tamin'ny mpitantana ny tanàna androany hitadiavana vahaolana momba io vary mangatsiaka io.
Manodidina ny 400 eo ny mpiasan'ny Kaominina ambonivohitr'i Mahajanga amin'izao fotoana.
jeudi, 30 mars 2017 13:08
Mahajanga : Vita ny tetezan-kely eo Aranta
Efa azo ampiasaina ny tetezana ifamezivezen'ny mponina ao amin'ny vakim-paritra fahatelo fokontany Aranta Mahajanga.
Manala fahasahiranana ny mponina ny fahavitan'ity foto-drafitrasa ity. Tetezana vita amin'ny hazo ny teny an-toerana teo aloha izao nosoloina izao.
Mirobo-drano hatrany ireo mponina noho ny toerana amoron-drano eny fa na tsy misamonta aza ny ranomasina ary tena mijaly tokoa raha sendra loza toy ny hain-trano satria tsy tongan'ny mpamonjy voina any an-toerana.
jeudi, 30 mars 2017 12:16
Mahajanga : Hahara-baovao ny mponina
Nahazo fahitalavitra ny fokontany 26 eto amin'ny Kaominina ambonivohitra Mahajanga. Avy amin'ny tetibolan'ny tetikasa CLD na ny Komity fampandrosoana ifotony no nahafahana nahazo izao fitaovana izao. Omaly alarobia tolakandro teo no nanolotra izany teto anivon'ny prefektioran'i Mahajanga ireo solombavam-bahoaka voafidy taty an-toerana, Nicolas Patsouris sy Lalao Rahantanirina.
Tranompokonolona Analakely: Téléthon Maroantsetra
Ho fanampiana ireo mponina traboina any Maroantsetra, vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ENAWO, dia manatanteraka tsipaipaika na téléthon ireo zanaka ampielezana avy any Marontsetra anio tontolo andro alakamisy 30 mars 2017, izay iantsoana ny rehetra hifanome tanana ho an'ireo mponina niaran'ny rivodoza.